UNWTO देशहरु उद्धार को आवश्यकता छ र साउदी अरब अरब संग प्रतिक्रिया
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » UNWTO देशहरु उद्धार को आवश्यकता छ र साउदी अरब अरब संग प्रतिक्रिया
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • निवेश • समाचार • मान्छे • पुनर्निर्माण • जिम्मेवार • साउदी अरब ब्रेकिंग न्यूज • स्पेन ताजा खबर • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा
पर्यटन को लागी आपतकालीन कल
911, तपाइँको आपतकालिन के हो? साउदी अरेबिया अरबौं डलर खर्च गरी विश्व पर्यटन संकट को लागी प्रतिक्रिया दिईरहेको छ। एउटा देशले कुरा गर्नु भन्दा धेरै गरिरहेको छ, यो विश्व यात्रा र पर्यटन उद्योग को उद्धार को लागी गम्भीर पैसा खर्च गरीरहेको छ - र यो मात्र एक पहिलो प्रतिक्रिया मिशन होईन।
"हामी आज इतिहास बनाइरहेका छौं!" यो यात्रा र पर्यटन उद्योग मा एक चम्किलो तारा को रिपोर्ट हो eTurboNews गत बर्ष अक्टोबर on मा प्रकाशित।
स्टार त्यो समयमा पर्यटन मा सबैभन्दा प्रभावशाली महिला, ग्लोरिया ग्वेरा थियो। त्यसबेला उनी सीईओ थिइन् विश्व यात्रा र पर्यटन परिषद (WTTC)। उनलाई थोरै मात्र थाहा थियो कि एक स्तर मा यस उद्योग को एक मूभर र शेकर को एक स्तर मा यो क्षेत्र र संसारले अझै देखेको छैन कि उनी आज बन्न सक्छिन्।
आज यात्रा र पर्यटन उद्योग को केन्द्र एक ठाउँ मा एक साथ आउँदै छ: रियाद, साउदी अरब। यो UNWTO (विश्व पर्यटन संगठन) को आफ्नो मुख्यालय स्पेन बाट साउदी अरेबिया मा स्थानान्तरण गर्न को लागी पहिलो कदम inclusde हुन सक्छ।
भविष्य र सबैभन्दा ठूलो वैश्विक उद्योगहरु मध्ये एक को रिकभरी एक दयालु राष्ट्र, साउदी अरब को राज्य को हात मा हुन सक्छ।
यी सबैको पछाडि २०३० को दृष्टि भएका नेता, यदि सफल भए, साउदी अरबका पर्यटन मन्त्री माननीय हुनेछन्। अहमद अल-खतीब विश्व पर्यटन को सुधार को लागी महिला WTTC को पूर्व सीईओ, मेक्सिको बाट ग्लोरिया ग्वेरा हुन सक्छ, जो अब उही मन्त्री अहमद अल-खतीब संग एक शीर्ष सल्लाहकार को रूप मा काम गरीरहेको छ।
G20 पनी ग्लोरिया ग्वेरा को लागी एक रोजगारी को प्रस्ताव प्राप्त भएको दिन हुन सक्छ, उनी अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। उनले इन्कार गर्न नसक्नुको कारण साउदी अरेबियाको देशले मात्र स्वस्थ तलब लिन सक्दछ तर विश्वमा यात्रा र पर्यटन पुनः सुरु गर्नमा उनको स्थिरता।
वास्तव मा एक मामला को रूप मा, साउदी अरेबिया ५०० बिलियन अमेरिकी डलर को लागी विश्व पर्यटन उद्योग दुबै आफ्नै देश मा बनाउन को लागी खर्च गरीरहेको छ, तर अरुलाई सहयोग र लगानी मा पनि।
धेरैजसो देशहरुमा यो उद्योग पछाडि राख्नको लागी पैसा सुक्दै छ, तेल धनी साउदी अरेबिया पर्यटन मा आफ्नो लगानी लाई एक जीत/जीत को अवसर को रूप मा मात्र नभई विश्व को लागी एक योगदान को रूप मा देख्छ।
मे २०२१ मा ग्लोरिया ग्वेराको नेतृत्वमा WTTC मेक्सिकोको क्यान्कनमा एक साथ आउन पर्यटन नेताहरुको पहिलो वैश्विक शिखर सम्मेलनमा सफल भयो।
WTTC को सीईओ को रूप मा उनको इरादा, संगठन को सदस्यहरु को रूप मा यात्रा र पर्यटन मा सबै भन्दा ठूलो कम्पनीहरु रहेको, निजी क्षेत्र लाई बचाउनु थियो। ग्वेरा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको खोजीमा थिए। एक प्रतिक्रिया G20 मा भाग लिन को लागी निमन्त्रणा संग प्याक गरीएको साउदी अरब बाट आयो। यो पहिलो पटक निजी सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रित गरिएको थियो।
यो के निजी उद्योग को आवश्यकता थियो, एक फरक बनाउन सक्छ कि ती संग एक सार्वजनिक निजी साझेदारी।
कोभिड -१ of को प्रकोप पछि पहिलो वैश्विक यात्रा र पर्यटन शिखर सम्मेलन भयो। स्थल मेक्सिको मा रिसोर्ट शहर Cancun थियो। एक गर्व ग्लोरिया ग्वेरा, जो मेक्सिको को लागी पर्यटन सचिव को पद 19 मार्च, 10, नोभेम्बर 2010, 30 को लागी, संचार र पर्यटन को दुनिया को लागी आशा को यो सफल शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो।
जो मेक्सिको मा अनुपस्थित थियो, UNWTO महासचिव Zurab Pololikashvili थियो।
Zurab तथापि साउदी अरब मा अनुपस्थित छैन। जबकि उनको आधिकारिक अडान यो छ कि उनी UNWTO होस्ट देश स्पेन संग कुनै मुद्दा छैन, UNWTO पहिले नै साउदी अरब मा एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलेको छ।
स्पेनी मिडिया रिपोर्टका अनुसार स्पेन र साउदी अरबका कूटनीतिज्ञहरु पर्दा पछाडि धेरै व्यस्त थिए।
UNWTO का धेरै सदस्यहरु, विशेष गरी UNWTO सदस्य काउन्टीहरु जो संयुक्त राष्ट्र संघ संग सम्बद्ध एजेन्सी को प्रतिष्ठित कार्यकारी बोर्ड को एक सदस्य हैन UNWTO द्वारा छोडिएको जब देखि Zurab नेतृत्व सम्हालेका छन्। UNWTO को तिर्ने सदस्यहरु को लागी एक महत्वपूर्ण फरक बनाउन को लागी मानिसहरु, पैसा, र संसाधनहरु छैनन्। सदस्यहरु प्राय: परित्याग मात्र नभई पानामा महसुस गर्छन्। UNWTO मा सदस्यता सस्तो छैन, विशेष गरी जब उद्योग कहिल्यै नराम्रो संकट को माध्यम बाट जान्छ।
यदि UNWTO मुख्यालय साउदी अरेबियामा सार्न सकिन्छ, र WTTC जस्ता अन्य संगठनहरु संग फेरी काम गर्न बाध्य हुनेछन् भने यो सबै अन्त्यमा आउन सक्छ। लेखन भित्ता मा पहिले नै छ। UNWTO र WTTC दुबै रियाद मा एक क्षेत्रीय कार्यालय पहिले नै खोलिएको थियो। यो G20 मा घोषणा गरिएको थियो। साउदी अरब उद्धार र पुनः गर्न को लागी तयार छपर्यटन सुरु। अन्य संगठनहरु प्रक्रिया मा छन्, अधिक साउदी अरब मा एक खुट्टा को बारे मा सोच्दै छन्।
सार्वजनिक रूपमा, स्पेन अहिले सम्म शान्त छ, तर म्याड्रिड मा विश्वसनीय स्रोतहरु को अनुसार, स्पेन क्रोधित छ। द्वारा सम्पर्क गर्दा eTurboNews, म्याड्रिड मा पर्यटन मंत्रालय प्रतिक्रिया छैन।
म्याड्रिड मा स्थानीय मिडिया रिपोर्टहरु को अनुसार, स्पेन मा अधिकारीहरु एक स्थायी होस्ट को रूप मा कमजोरी को लागी वर्तमान UNWTO मुख्यालय को एक लामो समयदेखि नविकरण नवीकरण प्रस्तावित।
जे होस् यो एक धेरै ढिलो आउन सक्छ, किनकि देशहरु साउदी अरेबिया को ढोका ढक्ढकाइरहेका थिए UNWTO मुख्यालय को राज्य को लागी एक समर्थन को लागी।
प्रत्येक देश लगानी र कोष को लागी भोको छ जब यो पर्यटन को लागी आउँछ, र साउदी अरब पहिले नै धेरै आपतकालीन कल को लागी प्रतिक्रिया दिईएको छ।
कैनकन मा WTTC शिखर सम्मेलन मा निर्विवाद पुरस्कार विजेता स्टार, निस्सन्देह, साउदी अरब बाट पर्यटन मन्त्री थिए। धेरै प्रतिनिधिहरुले भने eTurboNews उनीहरुको शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुको मुख्य कारण साउदी अरबको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्नु थियो। पैसा क्यानकन मा कुरा गरीयो र अब कुरा गरीरहेको छ।
साउदी अरेबियाका मन्त्रीले कैनकन मा पुरस्कार र मान्यता प्राप्त गरे जब WTTC सीईओ ग्लोरिया ग्वेराले आज हामी के देख्छौं को लागी ढोका खोले।
त्यहाँ धेरै गर्न को लागी छ, टीयहाँ अन्याय र चुनौतीहरु को एक धेरै छ eTurboNews शिखर सम्मेलन बाट रिपोर्ट।
त्यहाँ एक नयाँ भोलि पर्यटन को लागी भविष्यवाणी गरिएको छ eTurboNews प्रकाशक Juergen Steinmetz मात्र एक महिना पहिले। यो नयाँ भोलि वा कोही भन्छन् नयाँ सामान्य पहिले नै शुरू भएको हुन सक्छ। यस्तो देखिन्छ कि साउदी अरब एक स्पष्ट विचारक र नेता को रूप मा उभरिरहेको छ।
पर्यटन को दुनिया मा धेरै वक्ताहरु छन्। उनीहरु सीईओ, मन्त्रीहरु, र संघ प्रमुखहरु सामेल छन्। प्रत्येक देशमा साझा मा एउटा समस्या छ: समस्या यो हो कि त्यहाँ कुनै समाधान छैन, पैसा उपलब्ध समाधान को बारे मा छलफल गर्न को लागी छैन। कसैलाई थाहा छैन कसरी यात्रा र पर्यटन र यसको लाखौं सरोकारवालाहरु लाई उद्धार गर्ने।
रियाद मा एक साथी संग, सपनाहरु धेरै राम्रो संग साँचो हुन सक्छ। उनीहरु महँगो हुन सक्छन्, तर त्यहाँ समाधान छन्, र साउदी अरब एक मित्र र एक राष्ट्र को रूप मा 911 ११ (११२) कल को प्रतिक्रिया दिईरहेको छ कि यस उद्योग को बारे मा हेरचाह गर्न को लागी लाग्छ, यस क्षेत्र मा काम गर्ने मानिसहरु, र एक भयावह स्थिति मा अन्य देशहरु ।
आखिर, जबकि पर्यटन साउदी अरेबिया को लागी नयाँ छैन, राज्य को लागी पश्चिमी पर्यटन खोल्नु नयाँ छ, र विश्व को बाकी को मद्दत एक सांस्कृतिक मुद्दा हुन सक्छ, तर यो राज्य को लागी लामो अवधि मा एक व्यापार अवसर।
मानौं। एडमन्ड बारलेट र एचई अहमद अल खतिब अफ्रिकी पर्यटन रिकभरी शिखर सम्मेलनमा भेला हुन
हामी अहिले कहाँ उभिएका छौं?
मन्त्रीस्तरीय स्तर हेर्दा, केही मुट्ठीभर मन्त्रीहरु मात्र फरक पार्ने कोशिशमा छन्। ती मध्ये पक्कै माननीय छ। एडमण्ड बार्टलेट जमैका बाट।
बार्टलेट र अल-खतीब inten को एक कागजात मा हस्ताक्षर गरेd हालसालै, दुबै एक बॉब मार्ले टोपी लगाएका। बार्टलेटको अन्तर्राष्ट्रिय आउटरिच फोकस स्पष्ट रूपले साउदी अरबमा परिवर्तन भयो।
G20 सायद ग्लोरिया ग्वेरा को साउदी अरेबिया बाट जागिर को प्रस्ताव प्राप्त भएको दिन हुन सक्छ, उनी अस्वीकार गर्न सक्दिनन्। यो घटना पनि थियो जब साउदी अरेबियाले क्षेत्र को लागी विश्वव्यापी सहयोग को अरबौं डलर को प्रतिज्ञा गरेको थियो- र प्रतिज्ञा को पूरा गरी रहेको छ।
विश्व पर्यटन नेटवर्कका अध्यक्ष के सोच्छन्:
Juergen Steinmetz, अध्यक्ष विश्व पर्यटन नेटवर्क र होस्ट पुनर्निर्माण यात्रा छलफल भन्यो:
"विश्व पर्यटनलाई मद्दत चाहिन्छ, र साउदी अरेबिया प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। "
स्टेनमेट्ज, जो को प्रकाशक पनि हो eTurboNews थपे: "WTN भर्खरै एक धेरै सक्रिय शुरू भयो साउदी अरब ब्याज समूह को नेतृत्वमा उहाँको शाही महारानी डा। अब्दुलअजीज बिन नासेर अल साउद.
"यो वास्तव मा एक देश को लागी पर्यटन को शक्ति दिन को लागी देखाईरहेको छैन। यो doers र न केवल अनुयायीहरु र वक्ताहरु संग काम को बारे मा छ। साउदी अरेबिया एक कर्ता हो र यस संकट को समयमा यात्रा र पर्यटन उद्योग मा धेरै भन्दा धेरै अन्य देशहरु को तुलना मा संयुक्त गरीएको छ।
"साउदी अरब आफ्नो पैसा प्रतिज्ञाहरु पछि राख्छ। मँ यहाँ केहि गलत देख्दिन। पर्यटन धेरै क्षेत्रीय गतिविधिहरु को एक उद्योग रहनेछ। आखिर, यो सामान्यतया एक स्वार्थी उद्योग हो जहाँ गन्तव्यहरु एक अर्का संग प्रतिस्पर्धा।
"एक ठाउँ मा पर्यटन को एक केन्द्र हुनु एक महान विचार हो। यदि यस्तो एक वैश्विक केन्द्र को लागी होस्ट पैसा छ यो काम गर्न को लागी, यो यात्रा र पर्यटन को दुनिया को लागी एक जीत जस्तै लाग्छ।
"पर्यटन को लागी एक वैश्विक केन्द्र हुनुको मतलब यो होइन कि यो संसार एक वैश्विक विचारधारा वा पर्यटन को लागी एक वैश्विक सरकार बनाइरहेको छ। यो एक होस्ट देशको राजनीतिक विचारधारा संग कुनै सम्बन्ध छैन। कुनै देशको विचारधारा विश्व पर्यटन मा कहिल्यै हावी हुदैन। उदाहरण को लागी संयुक्त राष्ट्र एक अमेरिकी एजेन्सी हैन, भले ही यो संयुक्त राज्य मा होस्ट गरीएको हो। यो सायद उल्टो बाटो हो। संसारलाई एक साथ ल्याउन एक होस्ट देश सिक्न, अपनाउन र नयाँ विचार र संस्कृतिहरु को लागी खोल्न सक्छ।
"एक ठाउँमा पर्यटन मुख्यालय भएकोले पर्यटनलाई हेर्ने र विश्वका बिभिन्न भागहरुमा सञ्चालन हुने विविध तरीकालाई परिवर्तन गर्न सकिदैन। यो सब पछि एक सानो संसार हो, र जुमले हामी सबैलाई यो देखायो।
"हामीले साउदी अरेबियालाई धेरै 911 ११ फोनको जवाफ दिनुभएकोमा प्रशंसा गर्नुपर्छ। देश हाम्रो उद्योग को लागी पहिलो प्रतिक्रियाकर्ता बन्ने छ र मद्दत को लागी संसाधनहरु छन्। साउदी अरेबियाले अहिलेसम्म दयालु र मुस्कानको साथ प्रतिक्रिया दिईरहेको छ।
जेन Folsom भन्छन्:
माफ गर्नुहोस् Juergen, म प्रभावित छैन वा आश्वस्त यो एक बुद्धिमान विचार हो। वाशि Washington्टन पोस्ट रिपोर्टि team टोलीका सदस्य जमाल खशोग्गीको हत्या र टुक्रा टुक्रा पार्ने कुनै कानुनी नतिजा नदिएपछि साउदी अरेबिया किन अँगालेको छ? NYC मा विश्व व्यापार केन्द्रहरु लाई नष्ट गर्न को लागी षड्यन्त्र को बारे मा केवल २० बर्ष पहिले राज्य मा राखिएको थियो ... र महिला अधिकार को लागी सम्मान को एक सांस्कृतिक अभाव को बारे मा?
केवल किनभने एक देश पैसा छ-के त्यो राम्रो संग बराबर छ? चीनसँग धेरै पैसा छ-किन नेतृत्व उनीहरुलाई आदर गर्दैन?